Ikhava yamafu: izici, izinhlobo nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
La ifu kungenye yezinto eziguquguqukayo ezisemkhathini ezifundwa kakhulu nsuku zonke. Kubaluleke kakhulu ukwazi isimo sezulu. Amafu awakhombisi nje kuphela izimvula neziphepho, kepha futhi anikeza imininingwane eminingi ngemeteorology yesifunda. Namuhla kuyaziwa ngezindlela eziningi ukukwazi ukubikezela isimo sezulu esizoba khona futhi ukuba namafu kudlala indima ebalulekile.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ngazo zonke izici, izinhlobo nokubaluleka kokugcwala kwamafu.
2 Kunamafu emkhathini
2.1 Amafu aphezulu
2.2 Amafu aphakathi nendawo
2.3 Amafu aphansi
3 Ukubaluleka kokugcwala kwamafu
Amafu ayinqwaba yomhwamuko wamanzi akhiwa ukupholisa komoya. Ukuqala kokwakhiwa kwamafu kuqala ngokusebenza kwelanga kanye nemiphumela yemisebe emkhathini wethu. Lapho imisebe yelanga ishisa ubuso bomhlaba, kanjalo nomoya owuzungezile. Lapho umoya uqala ukukhuphula izinga lokushisa iba mncane kakhulu, ngakho-ke ithambekele ekukhuphukeni futhi ibuyisele umoya opholile phezulu. Ngokuphambene nalokho, ebusweni bomhlaba, umoya obandayo unesibopho sokushintsha umoya oshisayo okhuphukile. Njengoba ukuphakama lapho umoya ukhuphukela khona, ihlangabezana nezendlalelo ezibandayo ezenza ukuthi iqale ukunciphisa izinga lokushisa.
Ngakho-ke, lapho ifinyelela ungqimba olubandayo lomoya, izinga lokushisa layo liyancipha futhi ligcina selincipha libe ngumphunga wamanzi. Umhwamuko wamanzi awubonakali ngeso lenyama futhi unomphela emoyeni. Kodwa-ke, njengoba enamanzi amancane namaconsi e-ice alula, ayakwazi ukuhlala emoyeni ngemisinga emi mpo elula. Umoya omncane omile mpo owanele ukugcina amaconsi amanzi neqhwa emoyeni.
Umehluko okhona phakathi kokwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene zamafu ubangelwa ikakhulu yi- izinga lokushisa lapho umoya okhuphuke usuka ebusweni bomhlaba uncibilika khona. Kukhona amafu akha emazingeni okushisa aphansi kanti amanye akha phezulu. Uma izinga lokushisa lokwakheka liphansi, ifu liya likhula libe likhulu Ngokuya ngohlobo lwefu nezimo zomkhathi, kwakhiwa uhlobo oluthile noma lwezulu.
Uma amazinga okushisa lapho umoya ujiya khona aphansi kakhulu, ifu elenzayo lakhiwa amakristalu eqhwa. Enye into ethonya ukwakheka kwamafu ukunyakaza komoya. Amafu adalwa nini umoya uphumule uvame ukuvela ngezendlalelo noma ngohlaka. Ngakolunye uhlangothi, lezo ezakhiwa phakathi komoya noma umoya onemisinga eqondile eqondile ziveza ukuthuthuka okuhle mpo. Imvamisa lokhu okugcina kuyimbangela yezimvula neziphepho.
Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zamafu ngokwakheka kwawo:
Yilawo mafu akha endaweni ephakeme kakhulu futhi onke abikezela okuthile ngesimo sezulu. Ake sibone ukuthi yiziphi izici zamafu aphakeme:
UCirrus: Bangamafu amhlophe, asobala futhi angenazithunzi zangaphakathi. Zivela njengemisila yamahhashi eyaziwa kakhulu. Aziyilutho ngaphandle kwamafu akhiwa amakristalu eqhwa ngenxa yokuphakama atholakala kuwo. Zifana nemicu emide, emincane enokusatshalaliswa okungaphezulu noma okuncane ngendlela yolayini abafanayo. Kungabonakala ngeso lenyama ukubuka isibhakabhaka futhi ubone ukuthi kubonakala kanjani ukuthi isibhakabhaka besipendwe ngemivimbo yokuxubha. Uma isibhakabhaka sonke simbozwe ngamafu e-cirrus, kungenzeka kakhulu ukuthi emahoreni angama-24 alandelayo kube khona ushintsho olunzulu kusimo sezulu. Ngokuvamile, kuvame ukushintsha kokuncipha kwamazinga okushisa.
I-Cirrocumulus: Lawa mafu enza i-cabal cishe eqhubekayo ebonakala njengendawo eshwabene. Ngaphezu kwalokho, inezimo eziyindilinga njengokungathi zingama-flakes amancane kakotini. Amafu amhlophe qwa ngaphandle kokwethula isithunzi. Lapho isibhakabhaka sibonakala simbozwe ngalolu hlobo lwamafu, kuthiwa siyabhoreka. Kufana nokwelukwa kwezimvu. Lezi zinhlobo zamafu zikhomba ukuthi isimo sezulu sizoshintsha cishe emahoreni ayi-12 uma sivela eduze kwamafu e-cirrus. Abakhombisi njalo lolu shintsho lwesikhathi.
I-Cirrostratus: Babonakala ekuboneni kokuqala njengeveyili lapho kunzima khona ukuhlukanisa imininingwane. Kwesinye isikhathi imiphetho ingabonwa njengoba inde futhi ibanzi. Zibonakala kalula ngoba zakha i-halo esibhakabhakeni zizungeze ilanga nenyanga. Zivame ukwenzeka kumafu we-cirrus futhi zikhombise ukuthi isimo sezulu esibi noma indawo efudumele iyeza.
Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zamafu akhiqizwa ngobude obumaphakathi:
I-Altocumulus: Angamafu amaphakathi amise okwe-flake anesakhiwo esingajwayelekile. Lawa mafu anama-flakes nezinyikima engxenyeni yawo engezansi. I-Altocumulus ikhombisa ukuthi isimo sezulu esibi siqala ngenxa yezimvula noma iziphepho.
I-Altostratus: Angamafu anomumo wesendlalelo esincanyana nezinye izingqimba eziminyene. Ilanga livame ukubonwa ngalolu ungqimba lwamafu futhi ukubukeka kwalo kufana nokwamabala athile angajwayelekile. Ziveza imvula engenamandla kakhulu edalwa ukwehla kwamazinga okushisa.
Amafu aphansi aseduze kakhulu nobuso bomhlaba futhi akhiqizwa kuphela lapho kudalwa imvula. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi uma isimo sezulu sihle awekho amafu aphansi. Ake sibone ukuthi ziyini:
I-Nimbostratus: Zibonakala njengolwelwesi olujwayelekile olumnyama olumnyama olunamazinga ahlukahlukene wokukhanya. Kungenxa yokuthi ukuminyana kuyahlukahluka kulo lonke ifu. Zijwayelekile ezimvula zasentwasahlobo nasehlobo. Futhi zingatholakala kwizulu ngesimo seqhwa.
IStratocumulus: Yilezo ezinokususwa okufana namasilinda ahlanganisiwe. Futhi zinezimpawu ezithile ezinemibala ehlukene yegrey. Akuvamile ukuthi zilethe imvula.
Umugqa: Bangamafu anomumo woboya obumpunga futhi angenaso isakhiwo esichaziwe. Ngokuya ngobuningi bendawo ngayinye yefu, ezinye izakhiwo ezinesilinganiso esikhulu noma esincane se-opacity zingahlukaniswa. Lapho amazinga okushisa ephansi ezinyangeni ezibandayo zonyaka angamafu angahlala cishe usuku lonke futhi anikeze isici esidabukisayo ngokwengeziwe kuzwe. Bangabaphikisi bezinsuku ezinamafu ezithandwa kakhulu.
Ukubaluleka kokugcwala kwamafu
I-cloudiness ingukuguquguquka komkhathi okufundwe ngokujule ukwazi imeteorology yesikhashana. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ezithombeni zesathelayithi. Futhi ukuthi iziphuphutheki ezingasebenzi ngemisebe ye-infrared ziyakhubazeka lapho ubumnyama besifunda buphezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuba namafu nezimpawu zako.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu » Amafu